Semalt: Inona no atao hoe spam? Ahoana no atao mba hialana amin'ny fivoahana tsotra toy ny ABC?
Mampiasa ny Google Analytics izahay mba hanaraha-maso ny fifamoivoitanay ary manangona angon-drakitra momba ireo fitsidihana sy fitsapana. Mandritra izany fotoana izany, zava-dehibe koa ny hahazoana fampahalalana bebe kokoa momba ny spammers sy ny bots ary ny fomba fiantraikany eo amin'ny toerana misy antsika. Ny hackers sy spammers dia mikendry ny hanindry ny data Google Analytics ho an'ny tanjona manokana. Maniraka botsi-boka sy zava-dratsy ho an'ny tranokalantsika izy ireo, ka manakana antsika tsy hahazo ny loka fikarohana tsara indrindra.
Manazava i Ivan Konovalov, Semalt Manager Success Manager, fa misy karazana karazana spamma roa lehibe: spam crawler sy ghost spam. Ny spam fanta-daza mandrakariva dia manamboatra ny kaonty Google Analytics mba hanangonana ny fitsidihanao hosoka na dia tsy mbola nitsidika ny tranokalanao mihitsy aza ny bots. Ny mpitsikilo spam, amin'ny lafiny iray, dia tena mitsidika ny tranokalanao, fa sarotra ny mamantatra raha toa ka tafiditra ao amin'ny tranonkalanao na tsia izany satria ny taham-pidirana dia 100% foana.
Inona no atao hoe spam crawler?
Aty amin'izao fotoana izao, manantena izahay fa efa nampitombo ny fahalalanao momba ny spam referral ianao ary vonona ny hanana ny mombamomba ilay spam. Tena mitsidika ny blôginao na ny tranonkala ny mpitsikilo, saingy tsy misy fifandraisana amin'ny votoatinao na lahatsoratra. Ity karazana spam ity dia mahazatra kokoa noho ilay domoka maimaimpoana satria tsy mitaky loharano maro hanamboarana crawlers. Raha ny marina, ny Internet dia feno spam raitra ary matetika ampiasaina amin'ny Google, Bing, ary Yahoo mba hanondroana tranonkala maro. Ny tanjon'ny spam manadrohadra dia ny mamela ny olona hividy ny vokatra avy amin'ny rohin'ny fifandraisana. Ireo mpitsoa-ponenana sy ireo mpitsikilo dia manaparitaka ny bala-jiolahimboto ao anaty aterineto ary mikasa ny hamerina hiverina amin'ny tranonkalany manokana. Ankoatra izany, mampiasa spam-manadalana izy ireo mba hametrahana ny tranokalanao amin'ny valin'ny fikarohana.
Ahoana no hisorohana ny fitsangatsanganana amin'ny spampea tsotra?
Hatramin'ny nidiran'ny spam toy izao ny tranonkalanao dia hita fa marina sy azo itokisana ireo mpampiantrano..Indrisy anefa, tsy hiseho ho toy ny spam fanta-daza izy ary hampitombo ny taham-pitenenanao. Ny tranonkala fitadiavam-bady dia maneho ny fampiantranoam-pejy manan-danja ary manavaka ny tenany ho fitsidihana manan-danja, saingy tsy misy ifandraisany amin'ny tena izy. Izany no mahatonga ny fisorohana ny fitsangatsanganana spam dia fepetra ilaina raha te-hiantoka ny fiarovana sy ny fiarovana ny tranokala ianao.
Dingana 1: Fantaro ireo dom-spam rehetra sy anarana amin'ny tranonkala:
Mba hahafantarana ireo domains sy tranonkala spam rehetra dia tokony miditra ao amin'ny kaonty Google Analytics ary manaraka ireto dingana tsotra ireto:
1. Eo amin'ny ilany havia dia tokony hivezivezy amin'ny safidy Acquisition;
2. Safidio ny safidy rehetra mifehy ny fifamoivoizana ary mandehana amin'ny bokotra referrals;
3. Ao amin'ny faritra voalohany amin'ny kaonty Google Analytics, tokony tsindrio ny safidy Hostname hamantatra ilay spam crawler;
Hatramin'izao dia azonao atao ny mamantatra raha maniraka fitsangatsanganana ianao na tsia ny mpitsikilo.
Dingana 2: Mamorò ny fomba fiteny ara-dalàna:
Raha vao fantarinao ilay spam raitra, ny dingana manaraka dia ny mamorona teny manara-pitsipika amin'ny fomba manaraka:
traffic2cash \_ .xyz | darodar \_ .com | bokotra-for-tranonkala \_ .com
Tianay ny mampandre anao hametraka izany miaraka amin'ny Notepad sy TextEdit, ka hiverina amin'ny pejy voalohany ianao. Tsy mila manitsy ny fomba fiteny amin'ny '|' - mariho fa hampitsahatra ny fitenenana amin'ny fanatanterahana ny asany izy ireo.
Dingana 3: Manangana ny sivana ho an'ny custom ary esory ny domains sy ny tranonkala spam:
Ny dingana fahatelo sy farany dia ny mametraka ny filaharam-batana amin'ny endriny ary manaisotra ireo sehatra spam rehetra manadala. Noho izany dia tokony hahatsiaro ireto dingana manaraka ireto ianao:
1. Mandehana any amin'ny tontolon'ny Admin amin'ny kaonty Google Analytics.
2. Ao amin'ny menamena ambony, tsindrio ny bokotra All Filters ary tsindrio ity safidy fotsin'ny sary filamatra mena ity.
3. Raha vao noforonina ny sivana, tokony hampidirinao ao ny anaran-toerana mahiahin-dry zareo ary tsy manadino ny hanamarina ny sivana mba hahazoana antoka fa ny olana rehetra dia efa noraisina Source .